China DASQUA Fitaovana Indostrialy 0-1 mirefy Ultra-Precision ivelany mikrometera miaraka amina vy tsy misy vy sy fika amin'ny karbida | Dasqua
Fitaovana indostrialy DASQUA 0-1 mirefy Ultra-Precision ivelany mikrometera miaraka amin'ny tady vy sy kofehy karbida
fehezan-dalàna isan-karazany diplaoma A B C L W H araka ny marina
4111-8105-A 0-25 0,01 31 29.5 φ6.5 133 58.5 F18 0.004
4111-8110-A 25-50 0,01 56 38 φ6.5 137.2 76 F18 0.004
4111-8115-A 50-75 0,01 81 51 φ6.5 162.7 91 F18 0.005
4111-8120-A 75-100 0,01 106 63.5 φ6.5 187.7 105 F18 0.005
4111-8125-A 100-125 0,01 131 76 φ6.5 214.5 125 F18 0.006
4111-8130-A 125-150 0,01 156 89 φ6.5 251 142 F18 0.006
4111-5105-A 0-25 0.001 31 29.5 φ6.5 133 58.5 F18 0.004
4111-5110-A 25-50 0.001 56 38 φ6.5 137.2 76 F18 0.004
4111-5115-A 50-75 0.001 81 51 φ6.5 162.7 91 F18 0.005
4111-5120-A 75-100 0.001 106 63.5 φ6.5 187.7 105 F18 0.005
4111-5125-A 100-125 0.001 131 76 φ6.5 214.5 125 F18 0.006
4111-5130-A 125-150 0.001 156 89 φ6.5 251 142 F18 0.006
Anaran'ny vokatra: Micrometer Ultra-Precision ivelany
Item isa: 4111-8105-A
Faritra fandrefesana: 0 ~ 25 mm / 0 ~ 1 ''
Nahazo diplaoma: ± 0,01 mm / 0,0004 ''
Fahamarinana: 0.004 mm / 0.0001575 ''
• Vita mafy mifanaraka amin'ny DIN 863;
• kofehy spindle mihamafy, nototoina ary nilelaka tamin'ny tena marina;
• Miaraka amin'ny hidin-tsabatra;
• Carbideide vaovao vaovao ampiasaina amin'ny fandrefesana anvil fa tsy ny tendrony karbaona mora entina mahazatra. Ny tarehin'ny fandrefesana ny anvil sy ny spindle dia mifandray mivantana amin'ilay zavatra ho refesina, midika izany fa mety hiparitaka ireo velaran-tany 2 ireo. Ny karbide-tipped dia mampitombo be ny fampiasana ny micrometer;
• Tora-kofehy matevina miorina STAINLESS STEEL misolo ny vy / kofehy vy kofehy ampiasaina amin'ny indostria;
• Mazava ny diplaoman'ny laser vita amin'ny laser vita amin'ny satin ho mora vakiana;
• Miaraka amin'ny fijanonan'ny ratchet ho an'ny hery tsy miovaova (5- 8N 20% tsara kokoa noho ny fenitra mahazatra 5-10N), arovy tsara ny fitaovanao avo lenta. Rehefa manenjana ny micrometra dia miato amin'ny fomba mahomby ny ratchet amin'ny hery mahery vaika izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny ampela;
Ny mikrôometra dia fitaovana fandrefesana marina izay mampiasa visy voamarina handrefesana ny halavirana. Ireo fandrefesana ireo dia adika amin'ny fihodinana lehibe amin'ny visy izay azo vakiana avy eo amin'ny mizana na amin'ny dial. Ny mikrometera dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana, ny milina ary ny injeniera mekanika.
Ny mikrometrantsika dia miasa tsara amin'ny famolavolana ala, fanaovana firavaka sns, be mpampiasa amin'ny tokantrano, ny indostria ary ny faritra fiara, safidy tsara ho an'ny mekanika, injeniera, mpanao hazo, fialamboly sns….
Misy karazany telo ny micrometra: ivelany, anatiny ary halaliny. Ny mikrometa ivelany dia azo antsoina koa hoe calibre mikrometrimika, ary ampiasaina handrefesana ny halavany, ny sakany, na ny savaivony ivelan'ny zavatra. Ny mikrometrika ao anaty dia matetika ampiasaina handrefesana ny savaivony anatiny, toy ny ao anaty lavaka. Ny mikrometran'ny halaliny dia mandrefy ny haavony, na ny halaliny, amin'ny endriny rehetra izay misy dingana, zoro, na slot.
Alohan'ny fandidiana dia alao amin'ny lamba malemilemy na taratasy malefaka ny tarehy fandrefesana ny ravina ary ny spindle.
1 x Mikrometatra ivelany
Menaka DASQUA High Precision 6 Inch / 150mm ary IP67 ...